मेरो सेयरमा समस्या, ज्योति लाइफको आईपीओ भर्न लगानीकर्तालाई सास्ती !
काठमाडौं । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको साधारण सेयर (आईपीओ) आवेदन दिने लगानीकर्ताले मेरो सेयर नखुलेको कारण सास्ती खेप्नु परेको छ । आज (शुक्रबार) देखि खुलेको आईपीओमा मेरो सेयरबाट अनलाइमा आवेदन दिन तयार भएका लगानीकर्ता मेरो सेयर नखुलेका कारण हैरानीमा परेका हुन । यो समाचार तयार पार्दासम्म मेरो सेयरको सेवा अवरुद्ध भएको । सिडिएससीका अनुसार अहिले मेरो सेयर सफ्टवेयरमा...
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ निष्कासन, कहिलेसम्म दिने आवेदन ?
काठमाडौं । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको साधारण सेयर (आईपीओ) आज (शुक्रबार) देखि निष्काशन गर्दैछ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको दरले ६६ करोड रुपैयाँको ६६ लाख कित्ता सेयर निष्काशन गरेको हो । जसमा । कम्पनीका कर्मचारीले ३ लाख ३० कित्ता र सामुहिक लगानी कोषलाई पनि ३ लाख ३० हजार कित्ता छुट्याइएको छ । बाँकी रहेको ५९ लाख ४०...
रिलायन्स फाइनान्सले १० प्रतिशत बोनस दिने
सातामै ६९ हजारले लिए अनलाइन सेवा, दोस्रो बजारमा सकृय सेयर लगानीकर्ता ६ लाख
आजदेखि नागरिक लगानी कोषको साढे ३ लाख कित्ता शेयर विक्रीमा, प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ
कालिका लघुवित्तको लाभांश प्रस्ताव, बोनस कति ?
फेरि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?